‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो’ « News of Nepal
‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो’
काठमाण्डौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई शनिबार साँझ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा केही युवाले जहाजभित्र गाली गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईका कारण जहाज उड्न ढिलो भएको भन्दै उनीहरुले जहाजमा बसेका मन्त्री भट्टराईलाई गालीगलौज र हप्काइदप्काई पनि गरे । नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौ उड्न लागेको जहाजलाई मन्त्रीले एक घण्टासम्म कुराएको भन्दै उनीहरुले गालीगलौज गरेका हुन् ।
बुद्ध एयरको जहाजभित्र मन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियो केही युवाले सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक भेटिने र चिर परिचित व्यक्ती ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘मन्त्री योगेश भटराईलाई आज नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा रामधुलाई गरियो’ भन्दै फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखेका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले भने आफ्नो कारण जहाज १५ मिनेट मात्रै ढिलो भएको भन्दै यात्रुलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गरेका छन् । मन्त्री भट्टराई शनिबार डल्फिन महोत्सवको उद्घाटन गर्न कैलालीको धनगढी हुँदै टीकापुर पुगेका थिए ।
शनिबार साँझ उनी नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरबाट काठमाण्डौ फर्किएका थिए । सो भिडियो भाइरल बनेपछि मन्त्री भट्टराईले सामाजि सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै कार्यक्रम ढिला भएको र आफु काठमाडौं फर्किनैपर्ने दवाबमा रहेका कारण केही ढिला हुन पुगेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘आइतबार प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए । नेपालगंज बिमानस्थलमा ३–४ जना ब्यक्तीहरु आक्रमक शैलीमा मेरा बिरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुस्ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने ।त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।’
आज कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ…
Posted by Yogesh Bhattarai on Saturday, September 14, 2019
आईओएमको निमित्त डिनमा प्राडा राजेन्द्र गुरागाईं
चौतर्फी दबाबपछि कोरोना बीमा पुनः शुरू
प्रदेश १ को २०७७–०७८ को नीति
ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत २ जनामा कोरोना
प्रदेश १ को २०७७–०७८ को नीति..
ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत २ जनामा कोरोना..
प्रदेश १ को २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठसिहत)
ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि